ILavender Cottage, indawo yokungena yabucala, jonga ngaphakathi - I-Airbnb
ILavender Cottage, indawo yokungena yabucala, jonga ngaphakathi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSheena
Kutshanje ihlaziywe, izindlu ezimbini zokulala ezizimeleyo, ezinendawo yokupaka yabucala ngaphandle kwendlela. Ibekwe kufutshane nombindi wesixeko saseDundee, isiseko esihle sokuhlola iDundee kunye neendawo eziyingqongileyo, ezinonxibelelwano oluhle kakhulu lwezothutho.
Indawo entle kakhulu esanda kuvulwa iMyuziyam ye-V&A kunye neDundee Waterfront kukuhamba imizuzu nje embalwa. Kufuphi nelali yokuloba ethandekayo ye-Broughty Ferry, kunye neelwandle zayo ezintle kunye neendawo zokutyela ezithandekayo.
Abadlali begalufa banokuyonwabela zombini iSt Andrews kunye neCarnoustie umgama omfutshane wokuhamba.
ILavender Cottage incanyathiselwe kwikhaya lethu kodwa inocango lwangaphambili kwaye izimele ngokupheleleyo. Ihlaziywe ngokutsha kwaye isanda kufakwa kulo lonke. Uyakonwabela ukukhanya kwelanga eDundee (iyenzeka!) usebenzisa indawo yokugcina izinto, igadi ejonge emazantsi kunye nendawo encanyathiselweyo yokuhombisa.
Ikhitshi ifakwe ngokupheleleyo umatshini wokuhlamba, isitya sokuhlamba izitya, isitovu sokungeniswa, i-oveni yombane yefeni, imicrowave, ifriji kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho ukonwabele.
Igumbi lokuhlala linomabonakude we-LED we-32 ″ egcweleyo ye-HD enokubonwa simahla kwaye iyahambelana nokudlala iimuvi kwi-memory stick yakho ye-USB. I-Wifi ifumaneka kuyo yonke indawo, onke amagumbi aneesokethi zokutshaja ze-USB.
Ukufudumeza okuphakathi okubonelelwa ngebhoyila yegesi edibeneyo, amanzi ashushu angaguqukiyo ekhitshini nakwishawari.
Igumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokuhlambela likumgangatho ophantsi, igumbi lokulala eli-2 lifikelelwa ngezinyuko ukusuka kwigumbi lokuhlala.
Ipropathi ibisoloko icocwa ukuya kumgangatho ophezulu, uphononongo lubonisa oku, kwaye ngoku ndiqinisekisa ukuba yonke imiphezulu eqinileyo enokuthi ichukunyiswe ndim okanye iindwendwe zangaphambili zihlanjululwa ngemveliso efanelekileyo. Ndikwabonelela ngebhaskithi yeemveliso zokucoca, amalaphu alahlwayo kunye neeglavu kunye nesicoci sesandla kwezo ndwendwe zinokuziva zonwabe ngakumbi ukucoca iindawo ezithile ngokwazo.
I-Dundee City Centre yimizuzu esi-7 yokuqhuba, kukwakho nenkonzo yebhasi yesixeko.
Indlu yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukuya kwi-Odeon Cinema Complex, ipaki yokuthengisa kunye neevenkile zasekhaya.
Kukho uhambo oluhle lwaselunxwemeni oluya eBroughty Ferry nje imizuzu emi-5 ukusuka endlwini, apho uya kufumana uyolo lweendawo zokutyela, imivalo kunye neevenkile ezizimeleyo, ezinembono entle ngaphezulu koMlambo iTay ukuya eFife.
Kubadlali begalufa kunye nokuphonononga indawo ekude-iSt Andrews yimizuzu engama-26 ngemoto, ngelixa iCarnoustie Golf Course edumileyo iyimizuzu eli-17 kuphela yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Sheena
Sihlala kwindlu eqhotyoshelweyo kwaye siyafumaneka kwiindwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dundee